ဖုန်းနံပတ်မတောင်းတဲ့ ဂျီမေးလ် အကောင့်သစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » ဖုန်းနံပတ်မတောင်းတဲ့ ဂျီမေးလ် အကောင့်သစ်
ဖုန်းနံပတ်မတောင်းတဲ့ ဂျီမေးလ် အကောင့်သစ်
Posted by ဂျစ်စူ on Sep 22, 2011 in Know-How, DIY | 29 comments
ဒီနည်းကတော့ မာတီက ဘော်ဒါ februarycrazy ဆီက တွေ့ လာတာပါ.
ဂျီမေးလ် အသစ်ဖွင့်နည်း ၃ ခုလောက် တင်ထားတာတွေ့ လို့ ..လိုက်စမ်းရင်း စမ်းရင်း နောက်ဆုံးဒီနည်းနဲ့ .
အိုကေသွားတယ်ဗျာ။စိတ်ဝင်စားရင် သူပြောတဲ့အတိုင်းသာ သေချာလိုက်လုပ်ကြည့်ပေရော့….ဘာဖုန်းနံပတ်မှ မတောင်းပါကြောင်း..ရာနှုန်းပြည့်
Step 3. အောက်ပါအတိုင်း မေးလ်အကောင့်လုပ်နိုင်ပါပြီဗျာ…။
Step 4. ကဲ… အကောင့်သစ် ရ မရ gtalk မှာဖြစ်ဖြစ် ၀င်စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ တခါတည်း မီးအစိမ်းလေးလင်းလာရောဗျာ…။
သူ့ အဆင့်အတိုင်း..လုပ်ပြီးလို့ ..နောက်ဆုံးပြီးသွားလို့ဂျီမေးလ် ကို Create လုပ်လိုက်ရင်.ဒီအပေါ်ကလို ပေါ်လာကော
ဒါဆို အကောင့်သစ်ရပြီလို့ မှတ်ပေရော့..
ဒါဆို..ခုဏကလုပ်ခဲ့တဲ့ Username and password ရိုက်ပြီးဝင်ချင်ဝင်..သို့ မဟုတ်
https://mail.google.com/mail ကိုသွားပြီး ၀င်ချင်ဝင် နိုင်ပါပြီ..သို့ မဟုတ်
ဂျီတော့ခ် ဖွင့်ပြီး အရင်စမ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်…သူပြောတဲ့အတိုင်း မီးလေးကို စိမ်းနေတာပါပဲ :D
အကောင့် အသစ်ဖွင့်မရလို့ စိတ်ညစ်နေတာ ကိုပေါက်ဖော်ရေ .. ကျေးဇူးပါပဲ … ။
အခုနောက်ပိုင်း ဂျီမေးလ်က ဘာမှန်းမသိအောင်ပဲ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဗယ်ရီဖိုင်းလုပ်ခိုင်းတယ် … နံပါတ်ရိုက်ထည့်တော့လည်း ..အ.ဲ့ဒီနံပါတ်က သူတို့ ဆားဗစ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံမှာ မရှိဘူးနဲ့ … အဆင်မပြေဘူး … ။
အခုလိုနည်းလေး သိတော့လည်း … အဆင်ပြေသွားပြီ
Gmail က တကယ့်ကို ဖွင့်ရခက်တယ်ဗျာ… လောလောဆယ် Yahoo လေးကမှ အဆင်ပြေနေသေးတယ်… ဟိုတစ်ခါ Gmail Account အသစ်လုပ်တော့ ဒီအတိုင်းပဲ တစ်ခါတည်းရသွားတယ်… ဘာတွေ ကွာနေတယ် မသိ…
https:// ထည့်ရိုက်တော့လဲ Access Denied ဖြစ်နေပြန်တယ်။
ဟိုအပေါ်ဆုံးက url bar မှာ s ထည့်ပြီး ပြန် Try ကြည့်ပါ..
ဒါလဲ မရပြန်သေးဘူး …
ဆိုပြီးလုပ်ကြည့်တာ…သုံးချင်ရင် PW ဘလိုပေးရမလဲ..
ကျနော့်ဆီမှာ ကွန်နက်ရှင် အင်မတန်စုတ်နေလို့ ..တခြားလူတွေ Try ချင်ရင်..
Access denied ပြရင် အပေါ်က url bar ကို တစ်ချက်ကြည့်
http နောက်မှာ sပျောက်နေရင် ပြန်ပြန်ထည့်
ပြီးမှ ပုံမှန် အကောင့်လုပ်သလို..လုပ်သွားပေတော့..
ဒီနေ့ မရရင် နောက်နေ့ ရမယ်ဗျာ..
ရဘူးဗျာ ။ ဘာတွေလွဲနေပြီလဲတော့မသိဘူး ။ လုံးဝကိုဖွင့်လို့မရဘူး ။ ကျွန်တော်က တုံးတယ်ဗျ ။ ဒီထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးရေးပြီးတင်ပေးပါဦး ။
မရ ပြန်တော့ဘူးထင်တယ် verify account က ပေါ်တုန်းပဲ
အင်း သဘောကတော့ ကျော်ဝင်တဲ့ ဆိုက်ကို ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြုလိုက်တဲ့သဘော ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။
ဒါဆိုရင် ဒီအကောင့်မှမဟုတ်ဘူး ကျော်ဝင်တဲ့ဆိုက်တွေနဲ့ကော လုပ်ရင်အဆင်ပြေလား…
ကိုပေါက်ဖေါ်ရေ…အိုကေ သွားပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ နှစ်ခါသုံးခါ လုံးဝ အဆင်မပြေပါ။ မလျှော့သောဇွဲနဲ့ လုပ်လိုက်တာ ၆ခါမြောက်မှာ ကွန်ဂရက်ကျုလေးရှင်း ယူအာ နရူး အကောင့်ဆိုပြီး အိုကေ စိုပြေသွားပါတယ်။ ရွာသူ ရွာသား အပေါင်းတို့ရှင် ကိုပေါက်ဖေါ်ရဲ့ နည်းလမ်းလေးနဲ့ ကျွန်မ အကောင့်အသစ်တခု ဖွင့်လို့ရသွားပါပြီ။ ရမယ်လို့ အာမခံပါတယ် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ပြောဖို့ မေ့သွားလို့။ အဆင့် ၃ ပြီးတော့ မူလ create on account ပြန်ရောက်သွားတော့ ဘေးက sing in မှာ ၀င်ပြီးလုပ်တော့ နှစ်ခါ သုံးခါ မရဘူးပဲ ပြောပါတယ် ဒါနဲ့ ဂျီတော့မှာ ဆိုင်းအင်လုပ်တော့ မှားနေတယ်လို့ ပြောပြန်ရော ဒါနဲ့ ဂျီမေးမှာ သွားဝင်တော့မှ ကွန်ဂရက်ကျုလေးရှင်းလုပ်ပြီး အဲ့ဒီဘေးက ဘောက်မှာ ဆိုင်းအင်လုပ်မှ အိုကေ သွားတာပါ။
တခါထဲနဲ့ ကို တကယ်ရတာပဲဗျ ကျေးဇူးပါ။
အဲ့ဒီလူက ..သူများထက်ကို နည်းနည်းပိုတယ် … ကိုယ်တွေ တခါတည်းလုပ်လို့ မရပါဘူးဆိုမှ သူက ၀င်ညှော်တယ် ။ ဟွန်း :mad:
ကျေးဇူးပဲ ဆရာပေါက်ရေ…….။တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ ဘော်ဘော်တွေကို အကောင့်သစ်ဖွင့်ပေးနေရတဲ့
ကိစ္စတော့ အစင်ပြေသွားပြီ။သူတို့ကို လက်တို့လိုက်တော့မယ်။
မန်းကေဇက်လဲ အကောင့်သစ်ဖွင့်မရဖြစ်နေတယ် ကူညီပါဦး
ကျွန်တော် လုပ်တော့ password နေရာက အောက်က အနီရောင်စလုံးတွေ ပေါနေတယ် အစ်ကိုပေါက်။ဘယ်နှစ်ခါလုပ်လုပ် မရလို့ပါ။ဘာမှားနေလို့လဲ ခင်ဗျာ။ပြောပြကြပါ။
တခြား အင်တာနက်ဆိုင် ပြောင်းပြီး လုပ်ကြည့်.
ကျွန်မ အီးမေးလ်ကို comment ကနေကြည့်ရင် မြင်ရပါလိမ့်မယ် .. အဲဒီ မေးလ်လိပ်စာအတိုင်း ပို့လိုက်ရင် ရပါတယ် … အကောင့်အသစ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …. တစ်ခုလောက်အသစ်လုပ်ချင်နေတာတဲ့ အတော်ပဲ …
စုတ်ပါဘေ့ သံတွဲ ကော်နက်ရှင်ရယ် ခုထိဖွင့်လို့မရသေးဘူးလုပ်ဘို့ထားဦး !_!
ဦးပေါက်ဖော်ရေ ဖုန်းနံပတ်ကတောင်းမြဲတောင်းနေလို့ ကူညီပါဦး။ ဦးပြောသလို http://google.com မှာ hide my access ကိုနှိပ်လိုက်တယ် access denied ပေါ်တော့ https://mail.google.com ကဘယ်မှာရိုက်ထည့်ရမှာလဲဟင်။ ဦးပေါက်မှ မဟုတ်ပါဘူး သိတဲ့သူများအားလုံး ၀ိုင်းပြီး ကူညီပါဦးဗျာ။
https://mail.google.com/mail/signup ကူးပြီး ကို Hide my ass ဘေးနားက အကွက်မှာဖြည့်
Hide my ass ကိုနှိပ်..
Access Denied ဖြစ်လျင် ဟိုးအပေါ်ဆုံးက http နောက်မှ s ထည့်ပြီး Enter နှိပ်
ကျနော့်အထင်တော့ hidemyass ဆာဗာ ကြောင်နေပါတယ်..
ကူလုပ်ပေးမို့ စမ်းတာ ကျနော့်ဆီမှာ Error တက်နေလို့ပါ…
အဆင်ပြေတဲ့နေ့ လက်တို့ ပါ့မယ်
ကျွန်တော်ကတော့ ဖွင့်တိုင်းရတယ်ဗျ .. Internet Explorer ထဲကနေလုပ်တာဗျ စမ်းကြည့်ကြပါလားခင်ဗျာ
အင်တာနက်ထဲလိုက်နှိုက်တာ.. SMS verification မတောင်းပဲဖြစ်နိုင်တဲ့. .အောက်ကနည်းလေးတွေတွေ့တယ်..
1st: Go to GOOGLE.COM and click on SIGN IN on the top right corner.
2cd: Now click on Create An Account Now. And createanew GOOGLE account (NOT GMAIL) with any email (hotmail, yahoo, ect)
3rd: While you are signed in to your new google account, go to GMAIL and
Sign in to GMAIL with the email and password from STEP #2.
4th: Create your GMAIL account.
1. Just go to http://gmail.com and click “create an account” button and you will gmail account registration form.
2. So, find outawebsite where you findahuge list of names, give your first name and last name that you think is hardly exists in Google Database. Like any of those, “Swayze”, “Duvall” etc. If your gmail first name and last name is unique enough to hardly matched with any other user then you will not be navigated to Gmail SMS Verification Code request and therefore you will successfully bypass the gamil sms verification code. Be sure that your gmail first name and last name is matched with your gmail login name.
3. Next, avoid giving numbers and any special characters in your gmail login name. Prefer to giveadot and make it simple just as first name,adot and then the second name. If your desired gmail login name is unique and hardly matched with any other login name then you will successfully bypass gmail sms verification code.
4. Password must not be the same…you have to make it unique every time when you createauser on gmail. If your gmail password is unique, does not matches with any other gmail password, you are done with gmail sms verification bypass.
5. Never keepasecret question that is already appearing in the drop down. Keep it unique too…keep your own secret question every time you come to createauser on gmail.
Google Site ကိုဝင်လို့မရတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ..
တစ်ခြား site တွေအကုန်ဖွင့်လို့ရတယ်..
Gtalk လည်းမရဘူး သိတဲ့သူရှိရင်ပြောပြပေးပါဦး
အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်..အချိန်ရရင် ရသလို..၀င်မန်းတဲ့ နာမည်နဲ့အကောင့်လုပ်ထားပေးပါ့မယ်
taungpawthar.gazette ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တယ်ဂျာ..
Password ကို မေးလ်ကနေ ပို့ ပေးလိုက်တယ်..
ကျန်တဲ့ မရဘူဆိုတာတွေအတွက်လဲ အားတာနဲ့လုပ်ပေးထားပြီး မေးလ်နဲ့ပို့ ပေးပါ့မယ်.
ပြီးမှ password,security question,recovery mail ဘာညာ သာရကာ ကိုယ့်ဘာသာပြန်ပြောင်းပေရော့
ရပါတယ်.ဂျာ..အကုန်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်ချို မှ Google site လောက်ကတော့ အပျော့
ဂျီတော့မရတာလဲ ကွန်နက်ရှင် မကောင်းလို့ ပဲခင်ည
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်နက်ရှင်ကိုသာ အပစ်ပုံချ..အမှားမရှိ..ဆင်ပြေ၏..
ရဲဘော် ပေါက်ဖော် ရေ
ဒီပို့ စ်ကို အခု မှ ဖတ်မိလို့ 
အခုမှ သိလို့ ၊ ရဲဘော် ညွှန်သလို လုပ်တာ
jadetraderkosoe ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ 
ဂျီတော့ အကောင့်သစ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဗျို့ 